उज्वल थापासँग त्यो ५ मिनेट... | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal उज्वल थापासँग त्यो ५ मिनेट... | एक्सप्रेस | GNN Nepal
जेठ १८ गते, २०७८ १७:५८ मा प्रकाशित
कुरा २०७५ साल पुषतिरको हो । त्यतिबेला म भर्खरै काठमाडौं प्रवेश गरेको थिए । मेरा लागि त्यो समय काठमाडौंसँग कसरी मुकाबिला गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । पत्रकारिताका लागि काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा मेरो अध्ययन सुरु भइसकेको थियो । बिहानको समय क्याम्पस र दिउँसोको समय विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुँदैमा बित्थ्यो । पत्रकारिता कसरी गर्ने भन्ने जान्न म हरेक कार्यक्रममा जाने गर्थे ।
रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको तत्कालीन साझा पार्टी र उज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दल मिलेर बनेको विवेशील साझा पार्टी फुटिसकेको थियो । त्यतिबेला मिश्र र थापाको राजनैतिक सम्बन्ध धुजाधुजा भएको थियो । पार्टी फुट्नुमा को दोषी को निर्दोष यावत् विषयमा राजनीतिक वृत्तमा बहस चलिरहेको थियो ।
समय दिउँसोको ४ बजेको हुनुपर्छ । म त्यस्तै कार्यक्रमबाट फर्किदै थिए । काठमाडौंको व्यस्त सडक रत्नपार्कमा उनै उज्वल थापासँग मेरो अचानक भेट भयो । यसअघि मैले उनलाई मिडियाहरुमा देखेको थिए । एक सामान्य नागरिकको शैलीमा उनको व्यक्तित्व झल्किन्थ्यो । उनी दरबारमार्गतिर जाँदै थिए । उनी आफ्नै सुरमा थिए । उनको सुरलाई मतलब नगरेर म उनीसँग बोलिहाले ।
उज्वल सर नमस्कार । आराम हुनुहुन्छ ? मैले सुरुमै सोधे । उनले पनि जवाफ फर्काए । हजुर आरामै छु । त्यसपछि मैले उनलाई सोधे- ‘हजुरहरुजस्तो क्षमतावान युवाले राजनीतिमा अझ जुटेर पो अघि बढ्ने हो त यसरी फुटेर कहाँ पुगिन्छ ?’ उनले सालिन रुपमा जवाफ दिए । ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याका कारण यो अवस्था आएको हो । हामी पार्टीबाट अलग भएका हौं तर देशको विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा एजेण्डा उही हो ।’
‘यसले हामीजस्ता युवाहरुलाई नकारात्मक सन्देश अवश्य दिएको हो । युवाहरुलाई पार्टी फुटेकोमा दुख लागेको छ । अब तपाईहरुको पुनर्मिलन सम्भव छैन ?’ उनले भने- ‘हामी विवेकशील साझाको भन्दा फरक काम गर्दैछौं । अब हाम्रो गन्तव्य बदलिएको छ । नयाँ सपना, नयाँ लक्ष्यसहित हामी अघि बढ्दैछौं । तपाईहरुजस्ता युवाहरुलाई समेट्दै हाम्रो यात्रा अघि बढ्नेछ । त्यसपछि जसले राम्रो काम गर्छ उसैले जनताको समर्थन पाउने हो ।’ उनले सटिक रुपमा जवाफ दिए ।
उनको आँखामा वास्तवमै युवाहरुका सपना बोलेका थिए । थापा केही गर्न सक्ने दृढ क्षमता भएको युवा नेता रहेछन् भन्ने मैले थाहा पाए । अहिलेसम्म समृद्धिका नाममा गफ चुट्नेहरुबाट प्रभावित नभएको म उनीसँगको ५ मिनेटको भेटमै प्रभावित भए । वास्तवमा नेतृत्वको क्षमता र दक्षता पहिल्याउन कार्यशैली मात्रै ठूलो कुरा होइन रहेछ । उसको अनुहारमा देश र जनताप्रतिको चिन्ता कति छ त्यति बुझे पुग्दो रहेछ ।
त्यसपछि मैले उनको सम्पर्क नम्बर मागिहाले । उनले दुईओटा नम्बर दिए । ‘यी दुईमध्ये जुन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभए पनि हुन्छ । म रिसिभ गरिहाल्छु ।’ उनले मुस्कुराउँदै भने । त्यसपछि मैले उनले दिएको नम्बरबाट सँगै भएपछि नै मिस्कल गरे । र मेरो नाम सेभ गरिदिन आग्रह गरे । उनले सेभ गरे । फेरि भेट्ने बाचासहित त्यसपछि हामी छुट्टियौं । बाटोमा जाँदै गर्दा मेरो मानसपटलमा उनको बारेमा अनेक कुरा खेल्न थाले । यस्तो क्षमतावान युवा नेताहरुलाई हाम्रो देशले किन चिन्दैन ? हाम्रो देशले चिन्ने भनेको तिनै भ्रष्ट, जनतामारा अनि अहंकारी नेतालाई मात्रै हो ? जेहोस म उनको व्यक्तित्वबाट निकै प्रभावित भए ।
एक सादगीपूर्ण युवा नेताको अवसान
नेपालमा बाह्य रुपमा असल राजनीतिको मुखुण्डो लगाउने तर भित्री रुपमा राजनीतिमाथि कुठाराघात गरेकाहरु प्रशस्तै पाइन्छन् । तर थापाको व्यक्तित्व ५ मिनेटमै चिनियो र बुझियो । उनी निकै सालिन र भद्र स्वभावका व्यक्ति थिए ।
उनको उपचारका लागि देश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग संकलन भइरहेको थियो । सबैले उनको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरिरहेका थिए । तर उपचारका लागि संकलित रकम खर्च गर्न नपाउँदै उनको देहावसान भएको छ ।
यतिबेला उनी भौतिक रुपमा हामीमाझ छैनन् । उनको दिवंगत शरीर मात्र हाम्रोसामु छ । कोरोना संक्रमणसँग मुकाबिला गरिरहेका उनी अन्तत: पराजित भएका छन् । अर्थात उनको निधन भएको छ । अब उनी सम्झनामा मात्र रहनेछन् । अब नेपाली राजनीतिले उनको योगदान र गरिमालाई प्रशंसा गर्नेछ । लाखौं युवाहरुका प्रेरणाका स्रोत बनेका उनी अमर रहनेछन् । पत्रकारिताको यात्रामा उनीसँग एक अविस्मरणीय अन्तर्वार्ता गर्ने मेरो धोको अधुरै भयो । प्रिय उज्वल जी तपाईको मृत्युको खबरले स्तब्ध बनायो । तपाईप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली । परिवारमा धैर्यधारण गर्ने शक्ति मिलोस् ।
कर्णाली प्रदेशका २१४ सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किए
अझै तीन दिन देशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने